Ezemidlalo Ukufaneleka, Baseball
Mayelana 90% sabantu US abalandeli oshisekayo baseball. Kubonakala sengathi umbuzo kanjani ukuze ufunde ukuthi ukushaya nelulwane, ezinganeni American kwenzeka isakhasa.
Kungakhathaliseki kuthiwa baseMelika, i-baseball akuzange kusungulwe kubo. Ngesikhathi impande - eziningana ezemidlalo European Zithokozise ibhola kanye nelulwane. Ikakhulukazi efana baseball yesimanje ku Rounders bendabuko Russian. Kusukela ngekhulu lesikhombisa eNgilandi ikhilikithi futhi Rounders e. Lezi imidlalo kakhulu efana baseball. Futhi e-Germany, ngesikhathi esifanayo kwaba umdlalo ethandwa e shlagbol. Kuzo zonke lezi ezemidlalo Kwaba khona ukwahlukana eqenjini, iye bafaka futhi Batter, futhi kwezinye imithetho eminingi zifana kakhulu imithetho baseball zanamuhla.
Baseball World Championships yayiqhutshelwa emuva 30s kwekhulu elidlule, nge ukunqoba ubuqhawe lokuqala iwine hhayi BaseMelika British. Esikhathini esizayo, i-British imincintiswano e-baseball akazange iqhaza. Ngokuyinhloko, kwakukhona amaqembu esuka amazwe aseLatin America nase-United States. Baseball, imithetho zazo aguqulelwe Amasimu amancane ukudlala ezindaweni, ethandwa eJapane, Czech Republic, eNgilandi, Finland kanye Romania. Esikhathini 40s of ubuqhawe yena usejoyine Australia, futhi 70s - eNetherlands, Italy nase-Asia. Ithimba-Cuban nengxenye ubuqhawe izikhathi 21, iwine izikhathi 18, kuyilapho kusele kathathu wathatha izindawo ezimbili yesibili futhi omunye indawo yesithathu.
Kuze kube namuhla, i-umshiza, isithombe ongawabona ngezansi, ngasizathu simbe eRussia lihlotshaniswa ngezinga elikhulu of ithuluzi ukuzivikela, futhi kanjani ukuze ufunde ukuthi ukushaya nelulwane, tshela phezu namakilasi efanele abesifazane.
Inombolo Game eyodwa
Noma kunjalo, wonke umuntu waseMelika ukholelwa ngokuqinile ukuthi yasungulwa umdlalo we-baseball, kanye neqiniso lokuthi amaqembu American yiwo anamandla kakhulu kulo mdlalo. Lokhu ukuzethemba yisici ebalulekile Patriot American.
inkathi baseball kuvula US umongameli. Mayelana abadlali wathi nasemaphephandabeni. Lokhu izakhamuzi ethandwa futhi ocebile Melika. Mhlawumbe ethandwa ezingaphezu kuka football eRussia.
Ngemva yokuhlulwa kweJalimane eMpini Yezwe II, abantu baseMelika afakwe izikole German yesibili (futhi kamuva wenza okufanayo Japanese) baseball njengoba isihloko ayimpoqo. lo mdlalo kakhulu Japanese wafika ukunambitha.
Batter Professional ushaya nelulwane ukuze ibhola ungakwazi ukufinyelela isivinini esingamakhilomitha angu-150 km / h. "Indlela bafunde ukushaya nelulwane ne umphumela?" - umbuzo zonke luthela abasubathi. Kulokhu, into esemqoka - izingcezu isango futhi Ukuma. Umqeqeshi Athletic ukuletha lesifanele unhlangothi imiklamo. Ukuze uqale wakhe zifezeke phambi kwesibuko. Ngemva kokusebenza off the yokubeka kanye jika amasu, ungaqala ukushayela ibanga. Lapha udinga usizo umlingani. Ukuze uqale ibhola wakhonza ngesivinini aphansi kakhulu bese kancane kancane ukwandisa isivinini. Seven hits kweziyishumi - lena yi kwakukuhle kakhulu.
Ngakho, into yokuqala udinga ukufunda - lena sokuma lesifanele. Kucondza ngamadolo kancane izimisele namahlombe zifana kuya phansi. Grip izingcezu kufanele babe nokhahlo, isandla esishubile futhi uvalwe waqiniswa. Ngo nabantu abalungile ngilambatha ngakwesokunene ngenhla kwesokunxele ube kwesokunxele hander - kunalokho. Bamba kancane kudingeka cishe 5 cm kusukela phansi kanye usiko. Kuyinto jikelele zonke izidingo. kahle Ngamunye umdlali bangase babe siqu nothi lwawo esiyingqayizivele Ukugunda.
Ngokuphelele wagcwalisa yokubeka, ungaqala ukushaya ibhola. Bit has ukuhambisa ibhola endleleni emfushane. Uma hit maphakathi yokudlulisa amandla adonsela phansi inikeza ukushesha ezingeziwe ibhola, ukuze amandla umthelela - akulona ebaluleke kakhulu slugger, ukusabela ezibalulekile yokuhlabelela lesifanele.
Ibhanga izesekeli for the game baseball
Isikhumba baseball amagilavu aphathwe ngendlela ekhethekile ukuze sifinyelele namandla esiphezulu. Iphuzu okubalulekile ukuthembeka amalunga omzimba. Yini kuthakazelisa, igilavu entsha kakhulu ukulahlekelwa ubudala, ngoba abanayo Ukuzivumelanisa nezimo okwanele. Ukuze sifinyelele amagilavu futhi efudumele kuhhavini, uhambe phezu kwabo amasondo ngemoto ezinamafutha akahle. Nokho, umsizi athembeke kakhulu kuleli cala - umdlalo eside baseball. Yingakho abadlali ngakho ngaziswa amagilavu akhe. Ngaphezu kwalokho, kufanele kukhethwe ngokuqinile ubukhulu ezandleni zakho. Futhi-ke, lefties futhi righties kudingeka amagilavu ezahlukene. Professionals ngisho oda ngokwezifiso evumelanisa.
Ngaphambi ufunde indlela ukushaya nelulwane, udinga ukwazi ukukhetha ilungelo phakathi esikhundleni eziningi ethengiswa ezitolo. Emzimbeni eqinile umdlali ngaphezu kwanoma yimuphi omunye ofanele kancane obuphelele nge isibambo mncane. Abanye Ungathenga lemifisha isibambo awugqinsi, isisindo ezilinganiswe ngokuphelele. Futhi izingcezu ngoyisiwula kusinda uvumele ukulawula kangcono isifo sohlangothi.
I kancane lokuqala Wabasaqalayo kuzokusiza ukhethe Umqeqeshi. Ngokuvamile it has a ubude ngamasentimitha 80 noma ngaphansi nesisindo 850 grams. Ezinganeni izingcezu akhethiwe esekelwe ubude nesisindo.
Professionals ukusebenzisa imikhiqizo izinkuni kuphela, kodwa ayabiza kakhulu, ngakho nayizimfundamakhwela noma Wabasaqalayo ukuqala ekuzuzeni ibhithi aluminiyamu noma impahla oluyinhlanganisela.
Baseball - an interesting, siqala umdlalo inselele futhi umdlalo emangalisayo. Njengoba e yimuphi omunye umdlalo, kubalulekile ukuba ukusebenza kanzima, kodwa kuya enenkani eziphikelelayo impumelelo kuyofika.
Ukudoba e Kremenchug akuxhomekile isikhathi sonyaka
Scorer Martin St Louis ephezulu, "Tampa"
Ukubuyiselwa amakhono ukushayela.